fanontaniana Convair 990A & FSX
1 taona 11 volana lasa izay #155 by FCAIR
Izaho no tena Big Fan ny Convair 880 & 990. Niezaka nanao izay hahavita ny iray nametraka amin'ny VC nandritra ny volana maromaro tsy misy vintana. Ve misy manana 880 na 990 amin'ny VC izy ireo fa ho vonona ny hizara. Niezaka aho mba hametraka HJG convairs fa tsy mampiseho ao lalao. Taorian'ny fanandramana maro ny hahatonga azy hiasa aho tamin'ny farany vao nahafoy satria tsy manana VC ihany. Indray andro aho dia nahita ny anankiray teo virtoaly toerana Airline voaloko tamin'ny fiandohan'ny 60 ny AA Paint dia hita ao lalao saingy tsy misy VC. Tsy izaho no lehilahy lehibe rakitra mbola mianatra fa efa nahita lahatsoratra momba ny fanampiana VC ny fiaramanidina amin'izy ireo ka manontany tena fotsiny aho raha misy eto hainy ny manao izany, na mety hitarika ahy ho any izay afaka mianatra fomba izany. Misaotra mialoha
1 taona 11 volana lasa izay #156 by douglasjaen
1 taona 11 volana lasa izay #158 by Gh0stRider203
OK aiza no hitanao tsara tarehy io ??? Tsy maintsy manampy azy ny famoriam-bola!
Ary ny VC olana, amim-pahatsorana aho tsy fantatro ny olona. Ny marina na oviana na oviana aho efa mpankafy ny VC raha tsy izany ao amin'ny CPE C-130 na 707
1 taona 11 volana lasa izay #159 by Gh0stRider203
Lemme lahatsoratra tao amin'ny FB Group aho in .... angamba olona any dia hahafantatra!
1 taona 11 volana lasa izay #163 by FCAIR
virtualaal.weebly.com/fleet.html Izany no izay nahazo ny Download avy.
1 taona 11 volana lasa izay #164 by Gh0stRider203
Ya fantatro ... dia afaka mampiasa vitsivitsy mpanamory tsara raha liana ianao
1 taona 11 volana lasa izay #166 by FCAIR
Tsara tarehy vaovao aho any FSX Aho, dia tsy mihevitra ny tenako ho tsara mpanamory Tamin'io fotoana io. Fa izaho dia te hanao zavatra araka izay mandroso eo amin'ny sim. Ary Amerikana no Favorite Airline ireo tany am-boalohany sy ny loko fiaramanidina. Aza Fantaro ..
1 taona 11 volana lasa izay #167 by Gh0stRider203
raha mbola afaka mahazo avy amin'ny hevitra iray ho manondro amin 'ny, ary afaka hanoroka ny fiaingana amin'ny fipetrahana, LOL tsara ianao. izao ankehitriny izao ny fiaramanidina tranainy indrindra ananantsika dia Boeing Clipper 314 tranainy indrindra faharoa no ho 707
Fotoana mamorona pejy: 1.064 segondra